Bubata nri Google Reader gị na Ọkacha mmasị Technorati | Martech Zone
Otu ihe dị na teknụzụ ogo Technorati bụ ọtụtụ ndị na - ede blọgụ ndị ọzọ echekwala blog gị dịka ọkacha mmasị na akaụntụ Technorati ha (ịnwere ike ịgbakwunye nke m ebe a).
Ọ bụrụ na iji Google Reader ma ọ bụ akwụkwọ ọzọ na-eri nri, enwere ụzọ dị mfe iji gbakwunye ọkacha mmasị gị niile! You nwere ike mbupụ gị IGBOB faịlụ site na onye na - agụ ya ma webata ya na Technorati:
Na-ebupụ IGBOB site na Google (njikọ ala aka ekpe):
Na-ebubata gị IGBOB faịlụ n'ime Technorati ọkacha mmasị:
Njikọ: Bubata nke gị IGBOB faịlụ n'ime Technorati ọkacha mmasị.
Mmetụta ndị ọbịa na Web gị na ezigbo akwụkwọ nkwado
Ntụle dị ukwuu!
Anọ m na-eche ka m ga-esi mee nke a, ana m eche echiche ime ngwa.
Naanị ihe m chere bụ na nke a nwere ike ọ naghị ejikwa nri Feedburner nke ọma?
Ọ bụrụ na ndepụta akọwapụtara na Technorati dabara na nri Feedburner ọ ga-eme ya. Ọ bụ naanị ịme egwuregwu ozugbo n'etiti adreesị ndepụta na faịlụ OPML gị yana na Technorati.
Disemba 26, 2007 na 6:58 mgbede
Hey, ama m na nke a bụ akwụkwọ ochie, mana m na-eji ya eme ihe mgbe ahụ, ọ na-enye aka, daalụ 🙂
Disemba 26, 2007 na 9:34 mgbede
Ị nzọ, muskawo!